Muuri News Network » Daawo SawirroRagga ku nool jasiirad ka tirsan caalamka oo jirkooda u jarjara sabab yaab leh
Daawo SawirroRagga ku nool jasiirad ka tirsan caalamka oo jirkooda u jarjara sabab yaab leh
Aug 27, 2018 - Comments off
Jaziiradda Papua New Guinea, oo ku taalla dhanka bari ee dunida ayaa 80% shacabkeedu waxay ku nool yihiin tuulooyin miyi ah, kuwaasoo intooda badanna sii jira gobollada durugsan ee dalkaas, xiriir badanna lama laha caalamka intiisa kale.
Dadkaas ayaa la soo sheegayaa iney weli haystaan dhaqamo qadiimi ah, Astaamo kala duwan oo mid kasta ay micno gooni ah leedahay ayayna ragga dalkaas ku sameeyaan jirkooda si ay ugu hogaansamaan dhaqan soo jireen ahaa oo ay awooweyaashood ka soo gaareen.
Qaar ka mid ah astaamaha ay jirka ku sameystaan raga ku nool dhinaca waqooyi ee jaziiradda Papua New Guinea ayaa ku saleysan waxyaabo ay diin ahaan u aaminsan yihiin.
Dhaqannadaas mid ka mid ah oo lagu magacaabo Haus Tambaran ayey dadka ku nool deegaannada uu maro wabiga Sepik ugu dabaal degaan xayawaannada iyadoo markaas ay dadku iska soo qaadaan iney xayawaanno yihiin.
Xayawaannada ay aadka u xushmeeyaan waxaa ka mid ah shimbirta nooca loo yaqaanno cassowaries, Gorgorka, doofaarka, masaska iyo yaxaaska.
Hase ahaatee yaxaaska ayaa sida la ogsoon yahay ugu awood badan dhammaan xayawaanaadkaas oo ku nool wabiga Sepik gudihiisa ama agagaarkiisa.
Sidaas awgeedna dadka reer Sepik ayaa yaxaaska ka dhigtay ilaah ay caabudaan.
Mid ka mid ah dabaal degyada ugu yaabka badan caalamka ayay raga ku nool wabigaas agtiisa uga qeyb galaan iyagoo leh muuqaal aad loola fajaco.
Waxay iska sar-saraan qeybo ka mid ah jirkooda sida dhabarka iyo guud ahaan qaarka hore si ay u sameystaan astaamo u ekeysiinaya yaxaasyada, gaar ahaan marka ay isku qarinayaan biyaha wabiga si ay u ugaarsadaan.
“Wiilasha waxaa jirka ka sar-sara abtiyaashood si ay dhaqanka u waafajiyaan. Wakhtiga sar-saritaanka wuxuu noqon karaa hal saac ilaa labo saacadood,” waxaa sidaas yiri Aaron Malingi, oo ah guddoomiyaha degmada Parambei.
Xafiiska Muurinews Stockholm Swedan